လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုတွေအကြောင်း | သိလိုရာမေး
ထွေလာဆန်းပြား လိင်ဆောင်းပါး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုတွေအကြောင်း
အချိန် ၇၃ စက္ကန့်တိုင်းမှာ အမေရိကန်လူမျိုးတစ်ယောက်ဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါးစော်ကားမှုတွေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေ ကြုံရလေ့ရှိကြောင်းကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောက်ယှက်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Rainn.org ရဲ့ စစ်တမ်းတွေအရ သိရပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောက်ယှက်ခံရသူတွေထဲမှာ အသက် ၁၈ နှစ်ကနေ ၃၄ နှစ်ကြား အမျိုးသမီးဦးရေက ပိုများပါတယ်လို့လဲ စစ်တမ်းမှာ ပြောထားပါသေးတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်ခံရသူလို့ ပြောလိုက်ပြီဆိုရင် ယေဘူယျအားဖြင့် အမျိုးသမီးတွေက ပစ်မှတ်ဖြစ်တာများပေမယ့် ခုချိန်မှာတော့ ကလေးသူငယ်တွေ၊ ဆယ်ကျော်သက် ယောကျာ်းလေးတွေကို ကာမုမုဆိုးတွေက ပစ်မှတ်ထားလာကြပါတယ်။
ဒါဖြင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှု ဆိုတာ ဘာလဲ?
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်က စကားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အမူအရာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက်ဖြစ်စေ တဖက်လူရဲ့ သဘောတူညီမှုမပါဘဲ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြုလုပ်တဲ့ လုပ်ရပ်မှန်သမျှကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေထဲမှာ တစ်ဖက်လူရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ စကားနဲ့ ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်းတွေ ပြောဆိုတာ၊ လိင်အင်္ဂါတွေကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ပြသတာ၊ တစ်ဖက်သားရဲ့ လိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို ကိုင်တွယ်တာ စတာတွေလဲ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီထက်ပိုဆိုးရွားတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံရမှုမှာတော့
တစ်ဖက်လူရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ အတင်းအကျပ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုပြုလုပ်ခြင်း (ဥပမာ – သမားရိုးကျမုဒိန်းမှု နှင့် အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိန်းမှု)
ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ လိင်အင်္ဂါထဲသို့ အရာဝတ္တုတစ်ခုခုအား ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ထိုးသွင်းခြင်း
လူတစ်ဦးတည်းက အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများအား ဆက်တိုက်ကျူးလွန်ခြင်း
ဆွေမျိုးသားချင်း၊ သွေးရင်းသားရင်း မိသားစုဝင်များမှ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှု ကျူးလွန်ခြင်းအစရှိတဲ့ လုပ်ရပ်တွေအားလုံး အကျုံးဝင်ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု ခံရရင် ဘာလုပ်သင့်လဲ?
မိန်းကလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ယောကျာ်းလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ကိုတိုင်က တဖက်လူဆီက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေဖြစ်တဲ့ စကားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အမူအရာနှင့် ကိုယ်ထိလက်ရောက်ဖြစ်စေ လုပ်ခြင်းခံရပြီဆိုရင်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကူအညီတောင်းပါ၊ ပြုလုပ်သူကို ခုခံနိုင်စွမ်းရှိသလောက်ခုခံတုန့်ပြန်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာကို သွားခြင်းနဲ့ နီးစပ်ရာ ရဲစခန်းကို အကြောင်းကြားတာမျိုးတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ မုဒိန်းမှုလိုမျိုး ဆိုးဆိုးရွားရွား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုမျိုးတွေခံခဲ့ရရင်တော့
လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ နေရာကနေပြီး ရဲဆီ ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပါ…
ကိုယ်ခန္ဓာကို သန့်ရှင်းတာမျိုးတွေ၊ အဝတ်အစားတွေလဲလှယ်တာမျိုးတွေ မလုပ်ပါနဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီလိုမျိုး ခန္ဓာကိုယ်ကို သန့်ရှင်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ တရားခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ခြေရာလက်ရာတွေ၊ အရေးကြီးတဲ့ သက်သေအထောက်အထားတွေအားလုံး ပျောက်ပျက်သွားနိုင်လို့ပါပဲ။
နီးစပ်ရာဆေးရုံ ဆေးခန်းသို့ အမြန်ဆုံးသွားရောက်ပါ။ ဒါမှသာ ဆရာဝန်တွေက သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေအတွက် ကုသပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေ ကျူးလွန်ခံရတဲ့သူတိုင်းကို သိစေချင်တာက ဒီလို ပြုလုပ်ခြင်းခံရတာ ကိုယ့်အမှားမဟုတ်တဲ့အတွက် ကြိတ်မှိတ်မြိုသိပ်မနေပါနဲ့။ မိသားစုတွေ၊ သက်ဆိုင်ရာလူတွေကို ဖွင့်ဟပြောပြပါ။ ဒါမှသာ ကာမမုဆိုးတွေကို သူတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ကြီးလေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကို ချမှတ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။